Guddoomiye Cali Jayte “ Warbaahinta ayaa Qalad u Fasirtay Dagaalkii ka dhacay Baladweyne”+Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Guddoomiye Cali Jayte “ Warbaahinta ayaa Qalad u Fasirtay Dagaalkii ka dhacay Baladweyne”+Cod
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaal dhawaan ka dhacay galbeedka magaalada Baladweyne iyo eedeyn loo jeediyey masuuliyiin uu ka mid ahaa oo ku aaddanayd in dagaalka ay qayb ay ka ahaayeen.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in wax dagaal ah aan lagu tilaamikarin wixii ka dhacay magaalada Baladweyne maadaama sida uu sheegay shaqaaqadu ay ka dhalatay howlgal isbaaro qaadid ah oo ay sameeynayeen ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan oo muddooyinkaan waday howlgalkaasi islamarkaana maleeshiyo hubaysan ay weerar kala horyimaadeen ciidanka intii uu howlgalku socday.
Waxaa uu sheegay Mr Jeyte in howlgalkan uu soconayo tan iyo inta laga sifeynayo Kooxahaasi oo uu sheegay in shaar maamul ay dadka ku dhibaateeyaan,ka maamul ahaanna aysan ogolaandoonin in ay u dul qaataan falalka ay geysanayaan.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale waxaa uu intaa raaciyey hadalkiisa in hadda uu socdo dadaal lagu xallinayo xiisaddaka dhacday magaalada Baladweyne mar walbana maamulka G/Hiiraan uu diyaar u yahay in xal ay ka gaaraan arimahan oo kale waxaana uu tilmaamay in xal ka gaaridda arintan ay qayb ka yihiin wasiirro iyo xildhibaanno ka socda Hir-shabeelle oo hadda ku sugan Magaalada si ay usoo afjaranto arintu.
Qaar ka mid ah odayaasha gobolka Hiiraan ayaa horay ugu eedeeyey Masuuliyiinta Maamulka gobolkaasi inay si barer ah u weerareen beel ka mid ah beelaha daga galbeed magaalada Baladweyne ayna dileen nabadoon caan ahaa.